Siyaasi Cabdullaahi Shiikh Xasan oo Dhaliil badan usoo jeediyay DFS. | Siyaasi Cabdullaahi Shiikh Xasan oo Dhaliil badan usoo jeediyay DFS. – Latest News
« Ciidamada Uganda oo Mushaar la’aan ka cabanaya.
Dhagayso+Sawirro: Kulamdii Gaas iyo Xildhibaanada BFS oo soo idlaaday. »
Siyaasi Cabdullaahi Shiikh Xasan oo Dhaliil badan usoo jeediyay DFS.
Published August 20, 2014 | By gtimes
C/laahi Sheekh Xasan oo kamid ah Siyaasiyiinta somaliyeed ee ku Sugan Magaalada Muqdisho, ayaa eedeyn ujeediyay Dowladda Federaalka Soomaaliya, waxaana uu ku eedeeyay in fekerka ay qabaan Siyaasiyiinta ay uxireyso Dowladda.
C/laahi Sheekh Xasan, ayaa wuxuu sheegay in ciidamada Nabadsugida Soomaaliya ay weerareen oo ay qabteen Axmed Daaci oo lugihiisa mid kamid ah ku waayay difaaca Dowladda Federaalka Soomaaliya, waxaana sidoo kale uu sheegay in la bur-buriyay hantidiisa gaarka ah.
Sidoo kale Siyaasi C/laahi Sheekh Xasan, ayaa sheegay in ciidamada Dowladda ay xireen maalmo kadib Siyaasi ku nool Muqsdisho oo ka hadli rabay tacadiga ciidamada ay u geysteen Axmed Daaci.
Siyaasiga C/laahi Sheekh Xasan, ayaa sidoo kale ugu baaqay Dowladaha caalamka in Dowladda Federaalka Soomaaliya xabsiyadeeda ay ku jiraan, sida warka uu dhigay maxaabiis Siyaasadeeysan oo ay xiratay Dowladda.
Waayahan Dambe ciidamada Hay’adda Nabadsugida ayaa muqdisho waxa ay ka wadeen howlgal adag oo lagu bartilmaameedsanaayo hubka Dowladda ay ku sheegtay inuu yahay sharcidarada ee Muqdisho lagu dhex haysto.